सलहमा पनि लापरबाही
सरकारले वर्षा शुरू भएकाले नेपालमा सलह आउँदैन भन्ने ठोकुवा गरे पनि सलह नेपाल प्रवेश गरेको छ । नेपाली विज्ञहरू विहारबाट प्रवेश गरेका सलह विनाशकारी नहुने बताउन थालेका छन् । कोरोनामा जस्तै सलहमा पनि सही विश्लेषण गर्न नेपालका विज्ञहरू चुकेकै हुन् त ?
छिमेकी मुलुक भारतमा सलहको आतंक देखिएपछि नेपालमा सलह आउने सम्भावना उच्च देखेर यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक सम्मिलित समितिले सहलको जोखिम, त्यसलाई रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारी तथा सलह रोक्न आवश्यक विषादी आदिबारे अध्ययन गर्ने भनिएको थियो ।
तर, पानी पर्न थालेपछि सलहको संकट टरेको भन्दै सरकारले समितिलाई निष्क्रिय पार्‍यो । नेपालमा सलहको आक्रमण नहुने विज्ञको निष्कर्षविपरीत अहिले नेपालमा सलह देखापरेको छ । नेपालमा देखापरेको सलहले कृषिबाली र वनस्पतिमा ठूलो असर नगर्ने दाबी ती नै विज्ञ र प्राविधिकहरूले गरिरहेका छन्, जो सलह नेपाल नपस्ने दाबीका साथ यसको रोकथामको प्रयास नै आवश्यक छैन भन्थे । यसबाट नेपालका विज्ञहरू समस्याको गहिराइमा पुग्न र त्यसका विविध पक्ष र आयामबारे विश्लेषण गर्नभन्दा हचुवा कुराका पछि लाग्नेरहेछन् भनेर पत्याउने अवस्था आएको छ ।
नेपालमा अकस्मात् सलह आइपुगेका होइनन् । झन्डै हप्ता दिनअघि भारतको बनारस क्षेत्रतिर सलह आइपुगेको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमले दिइसकेका थिए । बनारसमा आइपुगेको सलह नेपाल पनि आउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न विज्ञहरू किन चुके भन्ने प्रश्न उठेको छ । १ दिनमा १५० किलोमीटरको यात्रा तय गर्ने सलह झुन्डझुन्डमै अफ्रिकी मुलुकबाट अरबका देश हुँदै एशियाको इरान अफगानिस्ता र पाकिस्तान हु“दै भारतसम्म आइपुगेको थियो ।
पानी पर्न थालेपछि नेपालले सलहको सम्भावनालाई पूरै बिर्सिएको हो । कोरोना संक्रमणमा जस्तै सलहको आक्रमणका विषयमा पनि सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय लिएको हो भन्ने आधार तय भएको छ । किसानलाई नआत्तिन सरकारले आग्रह गरेको छ र यसले नोक्सान गर्दैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । आशा गरौं, सरकारी विज्ञका भनाइ मिलोस् । तर, सरकारको विश्लेषण गलत हुँदा कोरोना अहिले महामारी बनिसकेको छ, सलहमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिदैन ।
सरकारले तत्कालै प्रभावित जिल्लामा विषादी छर्कन लगाउने वा अन्य प्रकारले सलह नभगाउने भने हो क्षति ठूलै हुन सक्छ । नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराईका केही जिल्लामा सलहले आक्रमण गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्नु हो, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई सीधै असर गर्छ । किसानले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिको लेखाजोखा त आप्mनो ठाउ“मा छदै छ ।
दक्षिणको हावा उत्तरतिर बहँदा नेपालमा सलह भित्रिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यो ठीकै होला, तर मौसम पूर्वानुमानमा अहिले निकै प्रगति भइसकेको छ । त्यसो हुँदा दक्षिणबाट उत्तरतिर हावा बहने कुरा सरकारले किन थाहा पाएन ? नेपाल नजिकैको भारतका क्षेत्रमा वर्षाकै बीचमा पनि सलह आएको समाचारमा सरकारले किन ध्यान दिएन ? प्रश्न गम्भीर छ । अबका दिनमा सलहले गर्ने असरबारे पनि सरकारी भनाइ पत्याइहाल्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
सलह प्रवेश भइसकेपछि नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्नेमा अध्ययन र निरीक्षणमै समय बिताउन खोजिएको छ । अकस्मात् देखापरेको कोरोनाजस्तो होइन, सलह । नेपालले ६० वर्ष अगाडि पनि सलहको प्रकोप भोगेको थियो । त्यसो हु“दा सरकार कोरोनामा जस्तै सलहमा पनि चुकेको छ । त्यसको मूल्य भने जनताले चुकाउनुपर्ने भएको छ ।
सलह आक्रमण भएकै दिन कृषिमन्त्रीले कृषिको विकास नहुनुलाई विगत ४० वर्षका सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीको पदमा बसेपछि गल्ती गरेको भए त्यसलाई सुधार्नुपर्ने हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले कृषिमा कुनै आशलाग्दो कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । यसले पनि सरकारको नेतृत्व लिनेहरूले हचुवामै काम गर्ने कुरालाई संकेत गर्छ ।
सार्वजनिक खर्चमा कटौती[२०७७ असार, ३०]
खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा अलमल[२०७७ असार, २९]
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ढिलाइ[२०७७ असार, २८]
मलको सास्ती[२०७७ असार, २६]
पूँजी बजार प्रतिवेदन[२०७७ असार, २५]